“Waxa Jira Gardarrooyin Innagaga Imanaya Nabad-diidka iyo Argagixiso, Waxaanan Filayaa…” Taliyaha Ciidanka Qaranka | Berberanews.com
Home WARARKA “Waxa Jira Gardarrooyin Innagaga Imanaya Nabad-diidka iyo Argagixiso, Waxaanan Filayaa…” Taliyaha Ciidanka...
“Waxa Jira Gardarrooyin Innagaga Imanaya Nabad-diidka iyo Argagixiso, Waxaanan Filayaa…” Taliyaha Ciidanka Qaranka
Hargeysa-(Berberanews)-Taliyaha cusub ee Ciidammada Qaranka Jannaraal Ismaaciil Maxamed Cismaan (Shaqalle), ayaa shaaciyey in kooxo argagixiso iyo nabad-diid ah gardarrooyin daandaansi ah ku wadaan dalka Jamhuuriyadda Somaliland, isagoo tilmaamay in ciidammo kamaandoos ah oo ku biiri doona millatariga Somaliland ay cashar u dhigi doonaan kooxahaas.
Janaraal Ismaaciil Shaqalle oo hadal ka jeediyey xaflad maalintii Salaasada loo sameeyey guutadii u horreysay oo kamaandoos ah oo dhammaysatay tababar muddo lix bilood ah uga socday Dugsiga Tababarka Ciidanka Qaranka ee Dararweyne, waxa uu sheegay in guutadan kamaandoosta ah loo diyaariyey wixii qalab ah ee ciidan u baahnaa, isagoo xusay inuu aad ugu rajoweyn yahay in guutadan Kamaandoosta ahi cashar u dhigi doonto kooxaha argagixisada iyo nabad-diidka ah ee falalka gardarrada ah ula yimaad waddanka Somaliland.
“Beryahan dambe waxa jira oo idinkuba aad ogtihiin gardarrooyin innagaga imanaya nabad-diidka iyo argagixiso. Waxaan filayaa oo aan ku rajo waynahay ciidammada casharka u dhigi doona inaad ka mid noqon doontaan, waxaanan rejaynayaa macallimiin badan in ay idinka soo baxdo oo qaarkiin noqdaan kuwa dugsiga Danab ka soo saareen, maadaama aad tihiin cutubyadii koowaad ee kamaandoos ah in aad noqotaan raggii macallimiinta u noqon lahaa saldhiga dugsiga Danab ee Dararweyne,” ayuu yidhi taliyaha ciidanka qaranka oo la hadlayey ciidanka kamaandoosta ah ee tababarku u dhammaaday.
Sidoo kale, taliyuhu waxa uu ka hadlay faa’iidada tababarku u leeyahay ciidammada qaranka, isagoo xusay in ujeeddada ugu muhiimsan ee ciidammadaas loo tababaray tahay sidii ay u difaaci lahaayeen dalkooda Somaliland.
“Waxaad soo dhammaysateen tababarkii Danab, waxase jirta tababarku in aannu dhammaan. Haddaad tababar qabto waad gabban kartaa, waad gal-galan kartaa, xabbadda waad ka dhuuman kartaa, laakiin haddii aanad tababar qabin bannaanka ayuun baad soo jiibsan oo xabbaddu dhafoorka ayey kaaga dhacaysaa. Waxa la idiin soo tababaray oo Danab la idiin geeyey ee tababarkaa adag la idiin soo mariyay ujeeddadiisu waa difaaca qarankeenna Somaliland ee aynu jecelnahay. Wixii qalab ciidan ah, gaadiid iyo war-isgaadhsiin waa la idin siinayaa si aad badda uga soo cabtaan,” ayuu yidhi Janaraal Ismaaciil Shaqalle.
Taliyuhu waxa uu ku amray taliska iyo macallimiinta dugsiga tababarka ciidanka ee Dararwayne in tababarada dambe muddadooda lagu soo koobo laba bilood, halka uu markii hore ka ahaa lix bilood, isagoo arrimahaas faahfaahinayeyna waxa uu yidhi; “Taliska dugsiga iyo macallimiintaba waxaan farayaa tababarradan kuwii ka horreeyey oo kale ma aha; waa degdeg, lixda bilood halkii laga qaadan jiray laba bilood in lagu dhammeeyo ayaan ka rabaa, iyagoo la mid ah kuwii lixda bilood lagu qaadan jiray. Dugsigan Dararweyne waxaan u rejaynayaa inuu noqdo ka ugu fiican dugsiyada ciidammada qaranka, waana dugsigii lagu tababaray guutooyinka jiidaha hore ku jira ee cadowgu ka cararo ee uu ka naxo markuu magacooda maqlo, sidaas oo kale in aad idinkuna noqotaan ayaan rejayaynayaa, magacana waa la idiin soo bixin doonaa sida guutadan loogu bixiyey Gama’diid.”
Hoggaanka Tababarrada Ciidanka Qaranka Col. Axmed Taansaani oo isna hadal ka jeediyey xafladdaas, ayaa sharraxaad ka bxiyay nooca tababarka guutada cusub ee kamaandoosta ah qaateen iyo muddadii ay ku jireen.
“Ciidankan Kamaandawsta ah waxay galeen tababar aad u adag laga bilaabo bishii 10-aad ee sannadkii hore ee 2011. Wixii tababarku qalab lahaa oo dhan way qaateen, waxaannu ahaa tababar aad u adag. Waxa ka mid ahaa dagaalkii buuralayda, xadhkaha sida loo isticmaalo webiyada marka laga gudbayo, sida loo qarxiyo meelaha cadowgu ku jiro. Wuxuu ahaa tababar aad u adag oo loogu talogalay ciidankan meelaha la mari kari waayo in la geliyo, waana ciidankii naftii hureyaasha qaranka.”
Kornal Taansaani oo ka warbixinayay ujeeddada tababarkaas waxa uu yidhi; “Tababarkaas adag ujeeddadiisu waxay ahayd in aad dalkiina ku difaacdaan. Tababarkii waad soo dhammayseen inkastoo aannu tababarku dhammaan oo aan la odhan karin tababarkii halkaasi ayuu ku dhammaaday, laakiin tabaabrkii aasaasiga ahaa waad soo qaadateen, dhibaatadaasna waxaad u soo marteen inaad difaacdaan dhulkiina hooyo oo aad maanta ku soo noqoteen, markaa hawshii aad u soo gasheen ciidanka eed u soo diyaar-garawdeen maanta ayaa la idinka doonayaa. Ciidankan meel kastoo loo baahdo waa loo dirayaa, markaa ku talogala hawlo adag iyo tababarkii aad soo qaadateen in aad uga faa’iidaysaan kuwa idinka dambeeya.”
Waxa kaloo uu kula dardaarmay ciidammadaas in waxa keliya ee ciidanku cadawgiisa kaga guulaysto ay kow ka tahay ismaqal iyo kala dambayn, sidaas darteedna looga baahan yahay inay muujiyaan is-maqal iyo kala dambayn.
“Ta ugu mihiimsan ciidanka, waa ismaqal iyo kala danbayn, guusha dagaalkana waxa lagu gaadhaa dhisbiliinka, aqoonta ayaa ku xigta. Ciidan aan ismaqal lahayn, aan dhisbiliin lahayn, aan kala dambayn lahayn marna kuma guulaysto dagaal kasta hadday noqoto hub kasta haddii la siiyo qalab kasta. Ta koowaad waxa weeye ismaqal iyo kala dambayn, taasna waa la idinka doonayaa, waana ta ugu muhiimsan. Taliyeyaasha berrito ayaad tihiin, dadka cusub ee u soo koraya ciidanku waa idinka, idinka ayaa berri janeraalo noqon doona. Ruushku wuxuu ku maahmaahi jiray askariga aan ku fikirin maalin inuu janan noqdo askari ma aha, weliba waxaad nasiib u leedihiin waxaad tihiin ciidammadii u horreeyey ee kamandaws ah ayaad tihiin. Waxa idinka horreeyey qolo ciidanka badda ah, idinka ayaana ciidammada Kamaandawsta dhismihii iyo aasaaskiisa ah, markaa nasiib fiican baad u hesheen inaad noqotaan cutubkii ugu horreeyey ciidammada kamaandawsta qaranka Jamhuuriyadda Somaliland, taasna waa inaad taariikh u noqotaan,” ayuu hadalkiisa ku xidhay Col. Axmed Tansaani.
Previous articleMaxaa Sabab u ah in Masuul kasta oo Xilka laga qaado ama ka tagaa eedaymo u sii jeediyo Wasiir Xirsi?
Next articleKalluunkii ugu badnaa ee Bakhtiya oo ka soo caariday Xeebaha Boosaaso iyo Puntland oo ka hadashay